10 Dugsiyada Caafimaadka ee Ugu Fiican Philadelphia | Bilaash Oo La Bixiyay
Raadinta shahaadada caafimaadka ee Mareykanka waa mid abaalmarin leh laakiin Philadelphia, waa wax badan oo abaalmarin badan. Sababta ayaa ah in Philadelphia ay leedahay qaar ka mid ah iskuulada caafimaadka ee ugu wanaagsan ee lagu tababaro dhakhaatiirta caafimaadka. Iskuuladan caafimaad ee ku yaal Philadelphia waxay bixiyaan waxbarasho caafimaad oo tayo sare leh oo ardayda u diyaarinaysa inay noqdaan dhakhaatiir looga baahan yahay waaxda caafimaadka.
Waxbarashada caafimaadka ee Philadelphia, Pennsylvania waa barnaamij shahaadada afarta sano ah oo lagu baro dhakhaatiirta cilmiga daawada. Iskuulada caafimaadka waxay ku shaqeeyaan iyagoo isticmaalaya labo sano oo fasal ah iyo waxbarasho shaybaar ku saleysan. Kadib, ardaydu waxay ku sameeyaan laba sano oo wareeg caafimaad ah isbitaal waxbaris halkaas oo ay wax ku bartaan kormeerka lataliyayaasha.
Ku dhowaad dugsi kasta oo caafimaad oo ku yaal Philadelphia wuxuu ardayda qalin jabisa shahaadada Dhakhtarka Caafimaadka (MD).
Qaar ka mid ah iskuulada caafimaadka waxay bixiyaan shahaadada Doctor of Osteopathic Medicine (DO) halka kuwa kale ay bixiyaan barnaamijyo isku dhafan oo u horseedaya shahaadada bachelorka iyo MD ama DO.
Philadelphia ma leedahay iskuulo caafimaad oo wanaagsan?
Immisa dugsiyo caafimaad ayaa ku yaal Philadelphia?
Iskuulada Caafimaadka ee Ugu sareeya Filadelfia
Kulliyadda Caafimaadka ee Sidney Kimmel
Kulliyadda Philadelphia ee Daawada Osteopathic (PCOM)
Haa. Philadelphia waxay leedahay iskuulo caafimaad oo dhowr ah oo bixiya waxbarasho caafimaad oo tayo sare leh. Iskuulada caafimaadka ee Philadelphia waxay si isdaba joog ah uga mid yihiin iskuulada caafimaadka ee ugu wanaagsan USA.
Immisa dugsi caafimaad ayaa ah in Philadelphia?
Waxaa jira sagaal (9) dugsi caafimaad ee aagga Philadelphia ee bixiya shahaadooyinka caafimaadka, daaweynta osteopathic, daaweynta ilkaha, iyo daaweynta carruurta.
Qeybtaan, waxaad ka heli doontaa liiska iskuulada caafimaadka ee ugu sareeya Philadelphia. Liiska iskuulada caafimaadka ee ugu wanaagsan Philadelphia waxaa la soo uruuriyay iyadoo lagu saleynayo tirada barnaamijyada, heerka aqbalaadda, aqoonsiga, iyo darajada.
Marka, iskuulada caafimaadka ee ugu sareeya Philadelphia waxaa ka mid ah:
Drexel Jaamacadda Kuliyada Daawada
Kulliyadda Caafimaadka ee Jaamacadda Drexel waa iskuulka caafimaadka ee Jaamacadda Drexel waxaana la aas aasay sanadkii 1848. Iskuulkan caafimaadka ee gaarka loo leeyahay ayaa u xuubsiibtay isku darka labo iskuul oo caafimaad oo ay ku jiraan haweeneyda caafimaadka ee Pennsylvania iyo kuliyadii hore ee homeopathy.
Hay'addu waa tan labaad ee ugu badan ee laga codsado iskuulada caafimaadka ee Mareykanka Sida ku cad Warbixinta Mareykanka & World Report, Jaamacadda Drexel University College of Medicine ayaa ku jirta kaalinta 83aad cilmi baarista Sidaa darteed, tani waxay ka dhigeysaa hay'adda mid ka mid ah iskuulada caafimaadka ee ugu wanaagsan Philadelphia iyo Mareykanka.
Kulliyadda Caafimaadka ee Jaamacadda Drexel waxay ku shaqeysaa iyadoo la adeegsanayo manhaj ku saleysan pass / failure. Dhawaan, barnaamijka caafimaadka ee jaamacaddu wuxuu isu beddelay manhaj cusub oo loo yaqaan Foundations iyo MSF. Aasaaska iyo manhajka xuduudaha waxaa loogu talagalay in lagu tababaro dhakhaatiirta mustaqbalka ee la jaan qaadi doona nidaamka daryeelka caafimaad ee had iyo jeer isbedelaya. Aasaaska iyo manhajka xuduudaha waxaa ka mid ah fahamka caafimaadka dadweynaha, xog ogaalnimada caafimaadka, iyo nidaamyada daryeelka caafimaadka iyo maalgelinta.
Manhajkan ayaa sidoo kale looga gol leeyahay in lagu tababaro dhakhaatiirta mustaqbalka iyo saynisyahannada cilmi baarista sayniska iyo farshaxanka daawada.
Kulliyadda Caafimaadka ee Jaamacadda Drexel waxay leedahay heerka aqbalaadda ee 7%. Si aad u gasho dugsiga, codsadayaashu waxay u baahan yihiin inay haystaan ​​ugu yaraan GPA oo ah 3.76. Kharashkeeda waxbarashadu waa $ 59,096 (gudaha-gobolka) iyo $ 59,096 (gobolka ka baxsan).
Kulliyadda Caafimaadka waxaa laga aqoonsan yahay Golaha Aqoonsiga ee Sii wadida Waxbarashada Caafimaadka
Iskuulka Caafimaadka ee Perelman ( Penn Med) waa iskuulka caafimaadka ee Jaamacadda Pennsylvania waxaana la aasaasay 1765. waa iskuulka ugu da'da weyn caafimaadka ee Mareykanka waana mid ka mid ah toddobada dugsi caafimaad ee Ivy League.
Penn Med waxay ku shaqeysaa iyadoo adeegsanaysa manhaj isku dhafan, iskuulaad kaladuwan oo raacaya seddex mowduuc oo ay ka mid yihiin Sayniska Caafimaadka, Farshaxanka, iyo Tababbarka Daawada, iyo Xirfadda iyo Dadnimada.
Iskuulka Caafimaadka ee cilmi-baarista cilmu-nafsiga iyo daryeelka bukaanka diirada saaraya ayaa ka dhigaya hay'adda mid ka mid ah iskuulada caafimaadka ee ugu sareeya Philadelphia.
Iskuulka Caafimaadka ee Perelman wuxuu kuxiranyahay cosbitaalo badan oo wax lagu baro sida tIsbitaalka Jaamacadda Pennsylvania, Xarunta Caafimaadka ee Penn Presbyterian, Isbitaalka Pennsylvania (Isbitaalka Carruurta ee Philadelphia), Isbitaalka Degmada Chester, Isbitaalka Guud ee Lancaster, iyo tisagu Xarunta Caafimaadka ee Philadelphia VA.
Penn Med waxay leedahay heerka aqbalaadda 4% iyo khidmadda waxbarashadeeda waa $ 63,137 (gudaha-gobolka) iyo $ 63,137 (gobolka ka baxsan).
Sida laga soo xigtay US News & World Report, Penn Med ayaa ku jirta 9th ee cilmi baarista ka dhex jirta iskuulada caafimaadka ee Mareykanka
Iskuulka Caafimaadka ee Perelman wuxuu heystaa aqoonsi wadajir ah oo ka socda Golaha Aqoonsiga ee Sii wadida Waxbarashada Caafimaadka (ACCME), Golaha Aqoonsiga ee Waxbarashada Farmashiyaha (ACPE), iyo Xarunta Aqoonsiga Kalkaaliyayaasha Mareykanka (ANCC).
Kulliyadda Caafimaadka Sidney Kimmel (SKMC) waa iskuulka caafimaadka ee jaamacadda Thomas Jefferson. Dugsigan gaarka loo leeyahay waxaa la aasaasay 1824.
Maaddaama ay tahay mid ka mid ah iskuulada caafimaadka ee ugu wanaagsan Philadelphia, SKMC waxay siisaa darajooyin caafimaad oo heer sare ah dhakhaatiirta hogaamin doonta kana mid noqon doonta bixinta isku dhafka daryeelka caafimaadka iyo kooxaha cilmi baarista.
Si loo galo SKMC, codsadayaashu waa inay haystaan ​​ugu yaraan GPA oo ah 3.75. Qiyaasta aqbalida ee dugsiga caafimaadka waa 59.7% iyo khidmadda waxbarashada waa $ 57,761 (gudaha-gobolka) iyo $ 57,761 (gobolka ka baxsan).
Kulliyadda Caafimaadka ee Sidney Kimmel waxaa aqoonsan Golaha Aqoonsiga ee Sii wadida Waxbarashada Caafimaadka (ACCME).
Dugsiga Caafimaadka ee Lewis Katz ee Jaamacadda Temple (LKSOM) waa iskuulka caafimaadka ee Jaamacadda Temple wuxuuna bilaabay 1901.
Manhajka caafimaadka ee LKSOM wuxuu xooga saarayaa aasaaska aasaasiga u ah sayniska aasaasiga ah iyo caafimaadka. Labada sano ee ugu horreysa manhajka caafimaadka waxaa lagu maamulaa qaab isku dhafan oo fikradaha sayniska aasaasiga ah, daaweynta caafimaad, xirfad-yaqaan, iyo anshaxa caafimaadka. Intaa ka dib, ardaydu waxay u isticmaalaan sannadaha caafimaad ee hadhay khibradda gacanta ee daryeelka bukaanka.
Markii ay qalin jabiyaan, ardayda waxaa la siiyaa shahaadada MD (Doctor of Medicine). LKSOM sidoo kale waxay bixisaa Ph.D. (Doctor of Philosophy) iyo MS (Master of Science) shahaadooyinka cilmiga biomedical. Dhinaca kale, Iskuulka Daawada wuxuu bixiyaa Barnaamij Daawooyin Sheeko ah.
Seynisyahanno ka tirsan LKSOM ayaa ahaa kuwii ugu horreeyay ee HIV ka saara unugyada aadanaha. Warbixinta Mareykanka & Warbixinta Adduunku waxay u dhigantaa Xarunta LKSOM's Fox Chase Cancer Center inay tahay Isbitaalka 9aad ee ugu wanaagsan Kansarka Dadka Waaweyn ee Mareykanka Tani waxay LKSOM ka dhigeysaa mid ka mid ah iskuulada caafimaadka ee ugu wanaagsan Philadelphia.
Iskuulka Caafimaadka ee Lewis Katz wuxuu heystaa aqoonsi ka socda Golaha Aqoonsiga ee Sii wadida Waxbarashada Caafimaadka.
Kulliyadda Philadelphia ee Daawada Osteopathic (PCOM) waa iskuul caafimaad oo gaar loo leeyahay oo ku yaal Pennsylvania waxaana la aasaasay 1899. Xarunta ugu weyn ee xaruunta waa Philadelphia halka xarumaheeda dheeraadka ah ay ku yaalliin Suwanee, Georgia (PCOM Georgia) iyo Moultrie, Georgia (PCOM South Georgia).
Maaddaama mid ka mid ah iskuulada caafimaadka ee ugu sareeya Philadelphia, PCOM waxay bixisaa tababar heer qalin-jabis ah. Dugsiga caafimaadka ayaa shahaado ka bixiya daawada osteopathic (DO), farmashiyaha (Farmashiista), daaweynta jirka (DPT), iyo cilmu-nafsiga (PsyD). PCOM sidoo kale waxay bixisaa shahaadada mastarka ee cilmu-nafsiga dugsiga, caafimaadka bulshada, horumarinta ururada iyo hogaaminta, daawada cilmiga sayniska, cilmiga bayoolajiga, iyo kaaliyaha dhakhtarka daraasadaha.
Kulliyadda Philadelphia ee Daawada Osteopathic iyada oo loo marayo iskaashi ay la leedahay isbitaallada waxbaridda waxay ka shaqeysaa xarumo caafimaad oo aasaasi ah oo kala duwan. Xarumaha daryeelka caafimaadka aasaasiga ah waxaa ka mid ah Xarunta Daryeelka Caafimaadka ee Qeybta Cambria, Xarunta Daryeelka Caafimaadka ee Lancaster Avenue, iyo Daawada Qoyska ee PCOM.
Si loo qoro PCOM, codsadayaashu waa inay haystaan ​​ugu yaraan GPA oo ah 3.5. Kharashka waxbarashada ee PCOM waa $ 28,364 (gudaha-gobolka) iyo $ 28,364 (gobol ka baxsan).
Barnaamijka Dhakhtarka Osteopathic Medicine (DO) ee PCOM waxaa aqoonsan Ururka Dhakhaatiirta Osteopathic American.
5 Sababood oo ay Dadku u Raadinayaan inay iskood wax ugu Bartaan Warshadaha Caafimaadka Dadweynaha
Barashada Hagaha Dibadda Deeqaha waxbarasho ee Mareykanka
Previous Post:Top 15 Jaamacadaha Poland ee Ardayda Caalamiga ah
Post Next:19 Dugsiyada Cunnada ee ugu Fiican Kanada | Toronto, Ontario, iyo Alberta